Qunsulka cusub ee sucuudiga oo si rasmi ah xilka ula wareegey duplamecy soomaaliya dhawaan magacawdey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home facebook.com Qunsulka cusub ee sucuudiga oo si rasmi ah xilka ula wareegey duplamecy...
Qunsulka cusub ee sucuudiga oo si rasmi ah xilka ula wareegey duplamecy soomaaliya dhawaan magacawdey.
Qunsulka Soomaaliya ee magaaalada Jeddah, Saudi Arabia , Siyaad Maxamuud Shire ayaa shalay si rasmi ah ula wareegay howlaha shaqo ee Qunsuliyadda guud oo dhawaan loo magacaabay.
Shaqo la wareegista ayaa timid kaddib markii kulan soo dhaweyn ahaa oo uu u sameeyay agaasimaha guud laanta wasaaradda arrimaha dibadda Sucuudiga ee Mecca, Mohammed bin Ahmed Tayyip, waxaana kulanka uu ka dhacay Magaalada Jeddah.
Kulankan ayaa Qunsulka guud ee Soomaaliya ee Jeddah ku gudbiyay salaan iyo fariin uu ka siday Madaxweynaha Somalia, iyadoo la isku weydaarsaday aragtiyo ku aadan xoojinta howlaha Qunsuliyadda iyo dadaalada loogu adeegayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sucuudiga .
Ugu dambeyn, kulankan oo ku dhammaaday jawi isfaham leh, ayaa waxaa Qunsulka guud ku wehlinayay fadhigan xoghayaha labaad ee qunsuliyadda, Ayuub Ismaaciil.
Previous articleIn kabadan boqol ardey oo ka qalin jabiyey Jaamacadda G/bari ee Puntland.
Next articleErgeyga midawga afrika ee Soomaaliya oo xilkiisa si rasmi ah ula wareegey.